ज्याक माले अलिबाबा प्रमुखको पद छाडे
बेइजिङ, भदौ २५
अनलाइन व्यवसायको चर्चित कम्पनी अलिबाबाका प्रमुख ज्याक माले मंगलबार राजीनामा दिएका छन् । माले पद छाडेसँगै उक्त कम्पनीको एउटा युग नै सकिएको बीबीसीले जनाएको छ । एक पूर्व अंग्रेजी शिक्षक रहेका ज्याकले सन् १९९९ मा सहसंस्थापकको रुपमा अलिबाबा कम्पनी स्थापना गरेका थिए । अलिबाबा त्यसयता निरन्तर प्रगति गर्दै विश्वकै ठूलो एउटा इन्टरनेट फर्म बन्न सफल भएको थियो ।
ज्याकले व्यवसायमा पाएको सफलताले उनलाई चीनकै सफल व्यवसायी बनाएको थियो । अहिले अलिबाबा ४ खर्ब ८० अर्ब डलर मूल्यवान् कम्पनी बनेको छ भने उनी चीनकै धनी व्यक्ति समेत बन्न सफल भएका छन् । ज्याकको पद अलिबाबाका प्रमुख कार्यकारी ड्यानियल झांगले कार्यकारी प्रमुखका रुपमा लिनेछन् । उनी चीनको इन्टरनेट उद्यमीहरुमध्ये कम्पनीबाट राजीनामा दिने संस्थापक समेत बनेका छन् ।
को हुन् ज्याक मा ? चीनको पूर्व सहर हांग्झाउमा गरिब परिवारमा ज्याकको जन्म भएको थियो । सुरुवाती करिअरमा उनले शिक्षण पेसा अंगालेका थिए । उनले आफ्नो पहिलो कम्प्युटर किन्दा ३३ वर्षका थिए । उनले पहिलो अनलाइनमा सर्च गर्दा कुनै पनि चिनियाँ बियर नभेटेपछि अचम्म भएका थिए । उनीसँग कुनै कप्युटिङ पृष्ठभूमि थिए । त्यसपछि उनले आफू बस्ने अपार्टमेन्टमै साथीहरुसँग मिलेर अलिबाबाको स्थापना गरे ।
उनले अनलाइन मार्केटप्लेसमा लगानी गर्न आफ्ना साथीहरुको समूहलाई मनाएका थिए । त्यसलगत्तै उनको कम्पनीको अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा चर्चित हुनपुग्यो । अमेरिकी सहर न्युयोर्कमा अलिबाबा सूचीकृत भयो । अलिबाबाले त्यहाँ विश्वकै ठूलो पब्लिक स्टक अफरिङ गरेको थियो । जुन आफैँमा कीर्तिमान बनेको थियो । ज्याकसँग ३८ अर्ब ६० करोड डलरको सम्पत्ति छ भने उनी चर्चित फोर्ब्स म्यागजिनको अर्बपति सूचीमा समेत अटाएका छन् ।
अब ज्याकले के गर्लान् ? प्रविधि उद्यमी ज्याक अबको समय समाजसेवा र शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित गर्न चाहन्छन् । गत वर्ष न्युयोर्क टाइम्ससँग कुरा गर्दै उनले आफ्नो कम्पनीमा अवकाशलाई नयाँ युगको सुरुवात हुने बताएका थिए । उनले आफूलाई शिक्षा औधी मन पर्ने बताएका थिए । पद छोडे पनि उनी अलिबाबाको बोर्ड निर्देशकमा रहिरहने र कम्पनीको व्यवस्थापनको नजिक नै रहने बताएका थिए ।